Casharrada Kusoo Dhawaada Casharrada Khabiirada Emailka | Martech Zone
Casharrada Kusoo Dhawaada Casharrada Khabiirada Emailka
Arbacada, Janaayo 2, 2019 Arbacada, Janaayo 2, 2019 KC Karnes
Fariinta soo dhaweynta ah waxay marka hore umuuqan kartaa mid aan dhib badneyn maadaama suuqleyda badan ay u maleynayaan mar hadii macaamil uu saxiixo, ficilku wuu dhamaaday waana lagu ansaxiyay kaalintooda. Suuqgeyaal ahaan, hase yeeshe, waa shaqadeena inaan ku hagno isticmaaleyaasha dhan waayo-aragnimo shirkadda, iyada oo ujeedadu tahay in kor loo qaado waligeed sii kordheysa qiimaha nolosha macaamiisha.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee khibrada isticmaale waa aragtida koowaad. Aragtidan ugu horreysa waxay dejin kartaa waxyaabaha laga filayo iyo haddii ay hoos u dhacdo, macaamiisha ayaa laga yaabaa inay go'aansadaan inay soo afjaraan safarkooda isla markaas iyo halkaas.
Shirkado badan ayaa ku guuldareysta inay qiraan sida muhiimka u ah markabku. Ku guuldareysiga in la baro dadka isticmaala aagagga badan ee shirkaddu ku bixin karto qiimaha ayaa u horseedi kara musiibo shirkadda mustaqbalka. Farriinta soo dhaweynta waxay noqon kartaa malqacad lacag ah oo lagu quudinayo macaamiisha macluumaadkan muhiimka ah.
Marka, maxay yihiin qaybaha ololaha farriinta soo dhaweynta ee guuleysta? Laga soo bilaabo barashada shirkadaha si guul leh u dul saaran dadka isticmaala miisaaman ololahooda farriinta soo dhaweynta, waxaa jira mowduucyo caadi ah:
Ka soo dir cinwaanka emaylka aadanaha.
Shakhsiyeeyo khadka maadada ee magaca qaataha.
Sharax waxa ay macaamiishu filan karaan marka xigta.
Sii nuxur iyo agab bilaash ah oo ay weheliso qiimo dhimis.
Sare u qaad suuq geynta.
Ku-hirgelinta istaraatiijiyaddan gudaha emaylkaaga farriimaha soo dhaweynta waxay gacan ka geysan kartaa kordhinta sicirka gujinta iyo ka-qaybgalka. Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed ee emayllada oo keliya ayaa la ogaaday inay kordhiso qiimaha furan 26%.
Muuqaalka kale ee xiisaha leh ee emaylka ayaa ah in lagu soo bandhigo dhaqdhaqaaqyo muuqaal ah oo muuqaallo ah si dhaqso isha loogu soo jiito oo loogu mashquuliyo. GIFs, tusaale ahaan, waxay bixiyaan kaliya dhowr waab oo xajinaya cabirka faylka oo u oggolaanaya emaylka HTML inay ilaaliyaan xawaare xawli xawli ku socda.
Suuq geynta u gudbinta ayaa noqotay ka mid noqoshada kale ee weyn fariinta soo dhaweynta si kor loogu qaado ganacsiga iyadoo loo marayo hadalka afka. Markuu macaamilku la wadaago saxiixyadooda dhow ama iibsashada saaxiib waxay noqon kartaa taatikada beddelka ugu awoodda badan, waana sababta ay emailka ugu horreeya u yahay waqti ku habboon in abuurkan la beero. Mid ka mid ah xeeladaha ugu wanaagsan ee lagu dhiirrigeliyo suuqgeynta gudbinta ee guuleysiga waa in la sameeyo dalab laba dhinac ah. Tani waxay siisaa macaamiisha wax la wadaagaya iyo qaatahaba dhiirigelin ay ku dhaqmaan gudbinta.
Adoo adeegsanaya xeelado sidan oo kale ah iyo inbadan oo adiga ah emayl u dir ololeyaal dhambaal soo dhaweyn ah waxay gacan ka geysan kartaa kor u qaadista isticmaale caafimaad qaba iyo khibrad macmiil oo qumman. Adeegso muuqaalka hoose ee CleverTap si aad u hagto istiraatiijiyadda fariintaada soo dhaweynta ah.
Tags: shaqsiyeynta emaylkatilmaamaha farriintafarriinta emaylkafarriinta dusheedagudbinta gudbintafariin soo dhawayn
KC Karnes waa istiraatiijiyad suuqgeyn caan ah iyo ganacsade mas'uul ka ah kobcinta qaar ka mid ah shirkadaha teknolojiyadda ugu shidan Silicon Valley, oo ay ku jiraan CleverTap, Sirdoonka Suuq-geynta Mobilada.
Suuqgeynta 'Omnichannel' Waxay Soosaartaa Macaamiil Daacad u ah oo Qiimo Badan
Cusub Martech Zone Logo loogu talagalay 2019